Koloiko sy Hajaiko ny Teniko | Fononteny
Lesona / /
Toy izao ny fitsipika arahina rehefa mampiasa fononteny [ ( ) ].
1 - Ampiasaina ny fononteny rehefa misy fanampim-panazavana tiana ampidirina mba hampahazava kokoa ny fehezanteny iray.
- Nividy voankazo (akondro, manga, pibasy) tany an-tsena aho androany.
- Nivory omaly tato an-trano izahay mpikarakara. (Natao tato ny fivoriana satria mihidy ny foibe rehefa Asabotsy.)
- - Lany ilay kandidà satria ireo mpanohitra azy izay tonga nandatsa-bato dia vitsy dia vitsy (latsaky ny 200).
Raha any ivelan'ny fehezanteny no misy ny fononteny dia manomboka amin'ny sora-baventy ilay fanampim-panazavana ao anatiny ary atsofoka ao anaty fononteny ny teboka na izay mari-piatoana hafa mipetraka any amin'ny faran'ny fanazavana. Diniho ny fipetraky ny fononteny amin'ilay ohatra faharoa eo ambony io.
2 - Ny fanampim-panazavana ao anaty fononteny dia mijanona ivelan'ny firafitr'ilay fehezanteny misy azy. Raha toa ka azo ampidirina ao anatin'ny firafitry ny fehezanteny ilay fanampim-panazavana dia esorina ny fononteny.
- Ny filoha (sy ireo mpanolo-tsainy) no tao anatin'ilay fiaramanidina.
- Ny filoha sy ireo mpanolo-tsainy dia tokony ho tonga amin'ny folo maraina.
3 - Rehefa manampy fanazavana amin'ny fehezanteny dia azo atao koa ny manolo ny fononteny amin'ny alalan'ny tsipika kely (—).
Ny filoha—sy ireo mpanolo-tsainy—no tao anatin'ilay fiaramanidina.
- Raha tsipika kely no ampiasaina dia tsisy elanelana eo aloha sy eo aorian'ilay tsipika.
- Raha fononteny kosa no ampiasaina dia misy elanelana eo anoloan'ilay fononteny misokatra sy ao aorian'ny fononteny mikatona, tsisy kosa ao anatiny rehefa manomboka sy mifarana ny fanampim-panazavana.
4 - Rehefa manampy fanazavana ka ialohavan'ny teny hoe izay na ilay ny fanazavana dia faingo no ampiasaina.
- Ramatoa Razay, ilay mpampianatra ny zanako faralahy iny, no nitondra ny fotoana androany.
- Iray tamin'ireo olona voasambotra i Jaona, ilay lehilahy mipetraka eo atsimonay.
- Matematika, izay anisan'ny taranja ankafiziko, no nahazoako naoty ambony.
- Amin'io tranga eo ambony io na esorina aza ilay fanampim-panazavana dia voatazona ny hevitr'ilay fehezanteny. Ohatra, na esorina ao anatin'ilay fehezanteny voalohany io aza ny ilay mpampianatra ny zanako faralahy iny izany hoe tonga dia: Ramatoa Razay no nitondra ny fotoana androany dia voatazona ny heviny.
- Raha ao am-povoan'ny fehezanteny no misy ilay fanampim-panazavana dia asiana faingo eo alohany sy ao aoriany. Raha any amin'ny faran'ny fehezanteny kosa dia eo alohan'ilay fanampim-panazavana ihany no misy faingo. Diniho ny fipetraky ny faingo amin'ireo ohatra eo ambony ireo.
5 - Rehefa manoratra fanafohezan-teny eo akaikin'ny fanalavana azy ilay fanafohezan-teny no atao ao anaty fononteny.
KHT (Koloiko sy Hajaiko ny Teniko).
Koloiko sy Hajaiko ny Teniko (KHT).
Raha miverimberina ny fanafohezan-teny ao amin'ny asa soratra iray dia amin'ny fotoana ipoirany voalohany ihany no ilaina apetraka ny fanalavana azy.
6 - Ny taona nahaterahana sy nahafatesan'olona iray dia atao ao anaty fononteny ary asiana tsipika kely manelanelana azy.
Jean Joseph Rabearivelo (1901-1937).
7 - Ireo tarehimarika famantarana ny firenena iray amin'ny laharana telefaonina dia atao ao anaty fononteny.
Raha misy fanontaniana tianareo hapetraka dia azonareo antsoina amin'ity laharana ity ny tompon'andraikitra: (+261) 40 77 490 00.